"Hey Sonos", ny mpanamboatra mpandahateny dia miomana amin'ny famoahana ny mpanampy azy manokana | iPhone News
"Hey Sonos", ny mpanamboatra mpandahateny dia miomana amin'ny famoahana ny mpanampy azy manokana
Karim Hmeidan | 06/05/2022 10:00 | Fitaovana IPhone
Efa niresaka im-betsaka izahay Sonos, ilay mpanamboatra malaza amin'ny mpandahateny mifandray izay manana a Lalana toy ny paoma. Ny tiako holazaina dia ny famolavolana sy ny kalitaon'ny Sonos dia nanana laza mitovy amin'ny an'ireo vokatra avy amin'ny Cupertino, ny fitoviana dia tena lehibe ka i Sonos dia te-hiroso amin'ny vokatra manaraka: manomboka ny mpanampy feo anao manokana, mpanampy toa an'i Siri. Tohizo ny famakiana rehefa omenay anao ny antsipirian'ity fandefasana azo atao ity.
Araka ny voalazanay dia tian'i Sonos hanadino ny fampiasana Alexa na Google Assistant izahay, mba hampiasanay ny mpanampy feo Sonos vaovao, mpanampy iray izay azontsika antsoina (araka ny fitetezana) amin'ny filazana ny andian-teny «aho sonos«. Inona no ho azontsika? dia mifehy ny mozikan'ireo sehatra narindranay ao amin'ny Sonos anay, Ary tsy azo adinoina fa ny Sonos dia mpandahateny mifandray ary afaka manamboatra ny serivisy mozika mivantana ankafizinay mivantana amin'ny mpandahateny. Niparitaka ny vaovao The saika ary araka ny lazainy ny Jona ho avy ho an'ny mpampiasa Sonos any Etazonia, havoaka any amin'ny firenena maro kokoa izy io any aoriana any.
Miaraka amin'ny mpanampy feo Sonos vaovao dia afaka mifehy ny serivisy toy ny Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer, ary Sonos Radio, taty aoriana dia hitarina amin'ny serivisy toa ny Spotify sy YouTube Music. Ary ny tena zava-dehibe, hoy izy ireo tsy handrakitra ny baikon'ny feo alefanay izy ireo, izany hoe hiloka amin'ny fiainana manokana izy ireo ary ny fanodinana feo dia hatao amin'ny fitaovana. Vaovao tsara izay hanatsara ny fahombiazan'ny Sonos antsika mba hahatonga azy ireo ho tsara kokoa amin'ny resaka fanamafisam-peo mifandray. Ary ianao, Mpisera Sonos ve ianao? Hampiasa mpanampy feo Sonos ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » "Hey Sonos", ny mpanamboatra mpandahateny dia miomana amin'ny famoahana ny mpanampy azy manokana
Ahoana ny fampiasana Reactions amin'ny WhatsApp
Fortnite miverina amin'ny fitaovana Apple amin'ny alàlan'ny Xbox Cloud Gaming